Factory Direct 24h Valiny haingon-trano Noely haingon-trano ...
AC 85-265V Solar System Misy LED Housing Street ...
Jiro 200 Watt Led Street ho an'ny jiro ho an'ny daholobe
hazavana ivelan'ny zaridaina namboarina jiro IP66 LED Landscape Lights
35W jiro an-kalamanjana tarihin'aratra tarihin-jiro 60W
Rehetra ao anaty iray Smart 30W 40W 60W LED jiro lalana masoandro jiro lalana
Fitaovana fanariana maty maty alim-baravarankely, elektrostatikan'ny fahanterana anit
fanodinana spray, fanoherana fatratra ny harafesina.
Ny fampidirana ireo takelaka masoandro, bateria ary mpanamory fotovoltaika dia mahatonga ny fametrahana jiro ho mora kokoa;
-5 ° ～ 90 ° manitsy mora foana ny zoro fironana amin'ny panne solaire mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny latitude rehetra erak'izao tontolo izao, ary ny refy marina dia mitazona ny jiro tsy tapaka amin'ny fametrahana batch;
Ny tetika famolavolana hazavana vaovao dia mihevitra lalina ny fahazavana mihazona ny mpandeha an-dalambe eny an-dalana, hany ka lehibe kokoa ny elatry ny jiro mitsivalana amin'ny lalana ary tsara kokoa ny fitovian'ny hazavan'ny lalana;
Ny mpanara-maso photovoltaic dia mametraka ny famirapiratan'ny jiro amin'ny vanim-potoana samihafa, ny fiasan'ny vatan'olombelona dia mampihena ny herin'ny jiro rehefa tsy misy olona, ​​ary ny fihenan'ny herinaratra mahery vaika ambany dia manatsara ny faharetan'ny jiro.
40W herinaratra an-kalamanjana tarihin'aratra tarihin-jiro 15W
Famolavolana lamaody maoderina ny fisehoana, nahatonga ny hazavana ho lasa zavakanto, Tafakambana amin'ny
tontolo iainana lavorary, natao dia toy ny tetikasa ambony.
· Fitaovana lehibe ampiasaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alim-bary avo maty, elektrika elektrika miteraka fahanterana
· Diffuser PC, fanoherana ny fiantraikany mahery vaika.
· TOSIKARATRA fidirana: AC110-277V, 50 / 60Hz, IP66, Ik08
Factory Direct Strong R&D Fahaizana nitarika hazavana ho an'ny zaridaina luna
Ny alikaola matanjaka be dia be, fitaovana elektrika elektrika
Diffuser PC, fanoherana fiantraikany mahery vaika.
TOSIKARATRA fidirana: AC100-240V, 50 / 60Hz, IP66, IK08
Mpamily napetraka amin'ny tanany
Jiro jiro an-dalambe ivelany rehetra miloko fotsy milentika fotsy mangatsiaka 100w
Nampiasaina tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny alim-by avo maty, fitaovana elektrika elektrika anit efa mihantitra
· Sarona fitaratra feno fangaraharana matevina, fanoherana ny fiantraikany mahery vaika.
TOSIKARATRA fidirana: AC100-240V, 50 / 60Hz, IP66, Ik09
· Karazan-tsary hafa azo isafidianana
· Faritra be rivotra: JD-1060 600 cm2, JD-1061 815 cm2
· Faritra kely azo isafidianana
Driver mpamily 0-10v
ip66 NEMA maty manary alim-baravarankely any ivelany orinasa mandeha jiro mandeha amin'ny masoandro antitra
· Fitaovam-pamoahana maty maty alimo, alim-bolan'ny elektronika anit efa antitra
· Saron-tsarimihetsika Pmma
Fametrahana marindrano: + 10 ° ∽-10 °
· Fametrahana mitsangana: + 10 ° ∽-10 °
Module LED: 1-4 pcs ho an'ny safidy
Orinasa santionany dia noraisina an-tanimboly zaridaina haingam-pandeha
· Ampiasaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alim-bary avo maty, elektrika elektrika anit ny fahanterana
· TOSIKARATRA ampidirina: AC100-240V, 50 / 60Hz, IP66, Ik08
Angie azo ovaina: + 15∽-15
· Faritra be rivotra: 570 cm2
· Warranty 5 taona
IP66 Led Lighting Street ho an'ny Highway solar pv nitazona hazavana amoron-dalana Miaraka amin'ny CE Standard
Jiro mifaninana Die Cast Aluminium eny an-dalambe
Len manarona, fanoherana fiantraikany mahery vaika.
Fametrahana marindrano: + 10 ° ~ -10 ° azo ovaina
Fametrahana mitsangana: + 10 ~ -10 ° azo ovaina
Faritra be rivotra: 375 cm2
Sombiny miady amin'ny safidy
AC 85-265V Solar System Misy LED Housing Street Light Motion Sensor 40 45 50 60 Watts Led Street Light
· Fitaovana fanariana maty maty alim-bary, elektrostatika efa mihantitra ao anaty
· Fanaronana Len, fanoherana ny fiantraikany mahery vaika.
* TOSIKARATRA fidirana: AC100-240V, 50 / 60Hz, IP66, Ik08
.Fametrahana mitsangana: + 10 ~ -10 ° azo ovaina
· Faritra be rivotra: 375 cm2
Jiro 250 watt nitondra hazavana teny an-dalambe
Sarona fitaratra, fanoherana ny fiantraikany mahery vaika.
Insulation class Il I safidy roa
5 taona Warranty maty fanariana Aluminium poste Jiro Pole Light LED Jiro zaridaina
1. Ny jiro dia fohy endrika, ary misy fiatraikany matanjaka eo amin'ny fahitana.
2. Ny ampahany lehibe amin'ny vatan'ny jiro dia vita amin'ny alimina maty, ary ny tampony dia tototry ny vovoka, izay misy fiatraikany tsara sy fanoherana ny harafesina.
3. Mampiasà haitao fanatanjahantena ambonin'ny tany tsy misy famirapiratanana, miaraka amin'ny fanamiana tsara.
4. Fiantohana dimy taona, naoty IP66 tsy misy rano.
2020 Hot Die Cast Aluminium Floodlight CE ROHS IP65 100w 150w 200 watt LED Light Flood
Fitaovana lehibe ampiasaina amin'ny alàlan'ny alim-bary avo maty, fitaovana elektrika elektrika anit-ny fahanterana
· Fanaronana fitaratra antonony, fanoherana ny fiantraikany mahery vaika.
· TOSIKARATRA fidirana: AC100-240V, 50 / 60Hz, IP66, Ik09